Haayadda Culimada Soomaaliyeed oo iclaamisay afar maalmood oo soon ah iyo maalin roob doon ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaHaayadda Culimada Soomaaliyeed oo iclaamisay afar maalmood oo soon ah iyo maalin roob doon ah
March 6, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Guddoomiyaha Haayadda Culimada Soomaaliyeed Shiikh Bashiir Axmed Salaad. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Haayadda Culimada Soomaaliyeed ayaa iclaamisay afar maalmood oo soon ah iyo maalin roob doon ah.
Sida uu sheegay guddoomiyaha Haayadda Culimada Soomaaliyeed Shiikh Bashiir Axmed Salaad, afarta maalmood ayaa ka bilaabmi doonta maalinta Arbacada ee soo socota iyadoo maalinta afraad oo Sabtida soo socota ahna dalka oo dhan laga oogi doono (Salaadul Istisqa).
Shiikh Bashiir Axmed Salaad oo la hadlayay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday in ay badiyaan baryada Alle si Rabi uu uga dulqaado colaada iyo abaarta dalka ka jira,
Soomaaliya ayaa wajahaysa abaartii ugu darnayd muddo sannado ah, in ka badan 6 milyan oo dad ah ayaa u baahan caawimad deg deg ah oo cuno iyo biyo ah, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
Xilli roobaadkii Deyrta oo aan si fiican u da’in, oo sida caadiga ah la heli jiray bilaha October iyo November, ayaa sababay abaarta. Xilli roobaadka xiga ayaa ah Guga waxaana la filayaa in uu bilaabmo bilaha April iyo May.
February 4, 2017 Itoobiya oo diblomaasiyiin sare u soo dirtay Soomaaliya si ay gacan uga geystaan ololaha Xasan Shiikh
Waqooyiga Kuuriya oo afar gantaal oo dhanka hawada ah ku gantay dhanka badda Japan
Boosaaso-(Puntland Mirror) Dad weynaha Puntland oo ay hoggaaminayaan culimada ayaa bilaabi doona dhaqaale uruurin si ay u caawiyaan dadka ku waxyeeloobay fatahaada Beled Weyne, sida uu sheegay Shiikh. Shiikh Fuaad Aflow, oo kamid ah culimada [...]